Khin Maung Chin: စိတ်ကူးရဲ့ခမ်းနားသောဆန္ဒ
06 September 2011 8:14 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ကဗျာ 8 ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Sep 6, 2011, 9:52:00 PM
ရင်နာတယ်ဆိုတာ အပြောသက်သက်ခံစားချက်မျိုးမဟုတ်တဲ့ ရင်တွင်းက တကယ်ကို နာကျင်ခံရခက်တဲ့ ဝေဒနာမျိုးပါ..
Sep 6, 2011, 11:47:00 PM
ခင်မင်တဲ့ အမကြီး jas
Sep 7, 2011, 4:55:00 AM
ကဗျာလေး ဖတ်သွားတယ် အေးချမ်းပါစေ ချင်းလေးရေ
စကားလုံးတွေ ပြောင်မြောက်လှချည်လား ချင်းကလေးရေ။ အတိတ်ကအရိပ်ဆိုးတွေကို ခဝါချပြီး အနာဂါတ်ကို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာနဲ့ နှစ်ကိုယ်ယှဉ်တွဲလို့ ဘဝဆုံးတိုင် လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေနော်။
Sep 7, 2011, 5:16:00 AM
ကဗျာလေးကို ခံစားပြီးဖတ်သွားပါတယ်... အစ်ကိုချင်းခံစားချက်ကိုလည်း မြင်ပေမယ့် အဲ့လောက်မခံစားသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်..
အစ်ကိုကဒီလောက်ဖြစ်နေပေမယ့် သူကဘာမှမဖြစ်လို့ပဲ မလာတာကို.. အစ်ကိုပဲနစ်နာတယ်လို့ထင်တယ်.. >.<
Sep 7, 2011, 7:59:00 AM
သြော် ချင်းကလေးမှာလဲ အဟောင်းဒဏ်ရာတွေနဲ့ပါလား.....
အဟောင်းတွေကပဲ အသစ်လုပ် နှိပ်စက်နေတယ် ထင်ပါရဲ့လေ.....
Sep 7, 2011, 9:56:00 AM
>>အန်တီပြောသလိုဖြစ်ချင်လိုက်တာအန်တီရေ..ကုသိုလ်ကံပေါ်မှာပဲ ယုံပုံထားလိုက်ရတော့မှာပဲ။အန်တီပေးတဲ့ဆုထဲကလိုစိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည် လင်အေးမြစေဖို့အတွက်ဘုရားလည်းရှိခိုးဆုတောင်းနေပါတယ်အန်တီ..။ အန်တီလည်းအသက်ရှည်အနာကင်းပြီးသက်စေ့နေသွားနိုင်ပါစေဗျာ..။
လောက်ပါဘူးဗျာ။ညီမကျနော့်ကိုစာနာနားလည်ပေးတာသိရလို့အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာရပါတယ်။ညီမပြောသလိုခံစားချက်ကင်းကင်းနဲ့နေသွားနိုင်ဖို့ကျနော် ကြိုးစားနေပါတယ်ညီမရေ.။ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ညီမလေး...။ >>မမအိန်ဂျယ်..ပြောင်းလဲချင်မိပေမယ့်ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့စိတ်တွေကြောင့် မမပြောသလိုအဟောင်းတွေပဲအသစ်ဖြစ်ဖြစ်လာပါရောလားဗျာ..ဟားဟား အားပေးကြတဲ့လေးစားချစ်ခင်ရသူမောင်နှမများအားလုံးကိုကျနော့်ရင်ဘတ်ထဲ မှာထာဝရထည့်ထားပါတယ်လို့..။
Sep 7, 2011, 10:54:00 PM
လှလိုက်တဲ့စာသားလေးတွေ...ရင်ထဲကို ရောက်လာလို့ ကူးထားလိုက်မိတယ် ချင်းကလေးရေ...အင်း တစ်ခုတော့ ရှိပေသပေါ့ ချစ်သူဘ၀မှာတော့ လောကကြီးကို ကျောခိုင်းလို့ ရချင်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်လာရင်တော့ လောကကြီးကို ကျောချင်းကပ်ပြီး ရင်ဆိုင်ကြရပါဦးမဗျား...
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း Stop Please !
ဘလော့ဂါဆိုသည်မှာ ?(Tag Post)
101 East - The Lady on the Lake